May 2015 ~ Myanmar Online News
လှေစီးဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထား
လူရော စိတ်ရော ပင်ပန်းလွန်းတဲ့အခါ အပန်းဖြေခရီးထွက်သင့်နေပြီလား ဆိုတာ
10:33 PM အထွေထွေ No comments
လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်းဖြစ်ပြီး ဟိုးအရင်တုန်းက ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေ၊ တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ရယ်မောပျော်ရွှင်ခဲ့ချိန်တွေကို တမ်းတနေရပြီလား။ အလုပ်က တစ်ရက်မှ အနားမရသလို အိမ်ရောက်ရင်လည်း လုပ်စရာတွေ ပုံနေပြီလား။ အားလုံးကို ချန်ထားပြီး အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့ လိုကိုလိုနေပြီဆိုတာ ဒီလိုအချက်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီး သိသင့်ပြီပေါ့။
၂၀၁၅ ထဲမှာ ကားကြီး ၆ ကားလောက် ရိုက်က်ဖို့ရှိတယ်လို့ ဆိုတဲ့ ပြေတီဦးက စီးပွားရေးအရ ရိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေတော့ မရိုက်ပါဘူးတဲ့
10:32 PM ပြည်တွင်းသတင်း, အနုပညာ No comments
ရုပ်ရှင်ကားကြီး အနေနဲ့ ၂၀၁၅ ထဲမှာ ၆ ကားလောက် ရိုက်ဖို့ရှိတဲ့အပြင် ထိုင်းနဲ့ဖက်စပ် ရိုက်ဖို့ ဇာတ်ကားတွေလဲ ရှိသေးတာကြောင့် အစစအရာရာမှာ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကာ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ပြေတီဦးကို မေးမြန်ဖြစ်ခဲ့ပုံက
ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရ၍ လှေစီးထွက်ပြေးသည်ဟု ပြောဆိုချက် ရင့်သီးလွန်းသည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် တုံ့ပြန်
9:20 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
နိုင်ငံတကာတွင် ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်ပွားနေသည့် လှေစီးခိုးဝင်သူများတွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်ပြေးသူများ ပါဝင်နေသည်ဟု ပြောဆိုချက်များမှာ ရင့်သီးလွန်းကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်းက ပြောကြားသည်။
ယူ ၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့် အကျည်းတန်ပြယုဂ်
8:50 PM အားကစား, ဆောင်းပါး No comments
ကမ္ဘာ့ဖလားအဆင့်သို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သော ယူ ၂၀ မြန်မာလူငယ်ဘောလုံးအသင်းအနေနဲ့ ၃၀ ရက် ၅ လ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က နယူးဇီးလန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာ့ဘောလုံးသမိုင်းရဲ့ ပထမဆုံးသော ကမ္ဘာ့အဆင့်ပြိုင်ပွဲအဖြစ် အင်အားကြီးဘောလုံးအသင်းဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံလူငယ်ဘောလုံးအသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ကြီးသွားပေမယ့် ဆယ်တန်းအရမ်းအောင်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ
8:39 PM အနုပညာ No comments
မြန်မာတွင် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုများ မရှိကြောင်း နော်ဝေးနိုင်ငံရောက် ဆရာတော်သုံးပါး မိန့်ကြား
7:06 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
နော်ဝေးတွင် ဆရာတော်သုံးပါးကို ကမ္ဘာ့သဟဇာတသင့်မြတ်ရေးဆု ချီးမြှင့်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ− မောင်ဇာနည်)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုး တုံးသတ်ဖြတ်မှုများနှင့် လူမျိုးငယ်များအပေါ် အနိုင်ကျင့်မှုများ မရှိကြောင်း နော်ဝေးနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သည့် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖိနှိပ်မှုအဆုံးသတ်ရေးညီလာခံ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆရာ တော်သုံးပါးက မိန့်ကြားလိုက် ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်မည်
7:02 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီအထိ ပါတီဥက္ကဋ္ဌသည် သူရဦးရွှေမန်း ဖြစ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌနေရာ အပြောင်း အလဲ ဖြစ်မည်မဟုတ်ဘဲ ရွေး ကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် သူရဦးရွှေမန်းကပင် ဦးဆောင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးသိန်းဆွေက ပြောကြားသည်။
သူနဲ့ ကိုယ် မြဲမမြဲဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေက ပြောပြပေးနိုင်တာ
12:30 AM အထွေထွေ No comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံ၏ လေးဘန်းဇ်ရောင်းသီအိုရီ(Lebensraum Theory) နှင့်အိန္ဒိယ၊မြန်မာ ။
8:43 PM ဆောင်းပါး No comments
ယနေ့. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့နှင့် အိန္ဒိယ ၊ မြန်မာနိုင်ငံတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးရင်ဆိုင်နေရသော ပြသနာမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ပညာတတ်များက တရားဝင်ဖြစ်ရန်ကြိုးပနိးနေသည့်၊ လေးဘနိးဇ်ရောင်းသီအိုရီကိစ္စဘဲဖြစ်သည်၊။
မွေးနေ့ကို တစ်ယောက်တည်း ဖြတ်သန်းမယ့် စံရတီမိုးမြင့်
8:41 PM ပြည်တွင်းသတင်း, အနုပညာ No comments
နှစ်ဦးစလုံးက တစ်ယောက်ကောင်းဖို့ တစ်ယောက်လမ်းခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရည်းစား ဟောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ခံစားချက်မရှိတော့ဟု စံရတီမိုးမြင့်က ပြော သည်။
‘‘နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း တစ်ယောက်ကောင်းဖို့ တစ် ယောက်လမ်းခွဲခဲ့ကြတာပါ။ အခု ဘာခံစားချက်မှ မရှိတော့ဘူး။ အ တွေ့အကြုံတွေလည်း အများကြီး ရသွားတယ်။ တစ်ယောက်တည်း နေရတဲ့ ဘ၀ကို ပိုသဘောကျ တယ်။ စစချင်းလမ်းခွဲတုန်းက တော့မပျော်ခဲ့ဘူးပေါ့’’ဟု ဆိုသည်။
ဖျော်ဖြေပွဲကို ဒုတိယအကြိမ် ဖျက်သိမ်းလိုက်လို့ ပရိသတ်ဒေါသနဲ့ကြုံနေရတဲ့ အစ်ဂီအဇယ်လီယာ
8:40 PM နိုင်ငံတကာသတင်း, အနုပညာ No comments
ဩစတြေးလျ ရက်ပ်အဆိုတော် အစ်ဂီအဇယ် လီယာသည် မြောက်အမေရိက သို့ နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေပွဲ Great Escape ကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ် မံဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ သဖြင့် ပရိသတ်များ ဒေါသထွက် ခဲ့ကြသည်။
12:50 AM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် (ဓာတ်ပုံ - ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))
လှေစီးဒုက္ခသည်ပြဿနာဇာစ်မြစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ကုလစွပ်စွဲချက်ကို မြန်မာငြင်းဆို
8:06 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထင်လင်းက လှေစီးဒုက္ခသည်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပြောကြားနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − အီးပီအေ)
အရှေ့တောင် အာရှ လှေစီးဒုက္ခသည်များ ပြဿနာ၏ ဇာစ်မြစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ၏ စွပ်စွဲ ပြောကြားချက်ကို မြန်မာဘက်က ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
မေလ၂၉ ရက်တွင် ထိုင်း နိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၌ လှေစီး ဒုက္ခသည်များအရေး ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပရာ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စား လှယ်က အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ကို စွန့်ခွာလာခြင်းအ တွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက တာဝန်ရှိကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) မှ အဆင့်မြင့်လက်ထောက် ကော်မရှင်နာဗော်လ်ကာတာ့ခ်က ယခုဖြစ်ရပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံက အဓိကတာဝန်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံမဲ့ဘင်္ဂါလီများကို မြန်မာအစိုးရက နိုင်ငံသားအဖြစ် မသတ်မှတ်ခြင်း သည် ပြဿနာတစ်ခုလုံး၏ သော့ချက်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါအ စည်းအဝေး၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် လှေစီးဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီ(၇၀၀)ကျော် ထပ်မံတွေ့ရှိ
7:34 AM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ဖျာပုံမြို့နယ် ဓမင်းဆိပ်ကျေးရွာ အရှေ့ဘက်ရေမိုင်(၃၀)ခန့် အကွာ တွင် လှေစီးဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး (၇၂၇)ဦး ဖမ်းဆီးရမိ ဓာတ်ပုံများ
တပ်မတော်ရေယာဉ်မှ ပင်လယ်ပြင်လုံခြုံရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် နံနက်(၆)နာရီခွဲခန့်တွင် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံမြို့နယ် အရှေ့တောင်ဘက် (၃၄)မိုင်ခန့် ပိုက်နက်ပင်လယ် အတွင်း ၌ပင်လယ်ပြင် ဘေးဒုက္ခ ကျရောက်နေသည့် ထိုင်းစာတန်းပါ အလျား (၇၆)ပေခန့် ရှိ သံခွံငါးဖမ်းလှေတစ်စီးအား ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသား (၆၀၈)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၇၄)ဦးနှင့် ကလေး(၄၅)ဦး စုစုပေါင်း(၇၂၇)ဦးနှင့် အတူ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ လှေစီးဒုက္ခသည်များအား ပဏာမစစ်ဆေး မေးမြန်းချက်အရ ၎င်းတို့သည် ၂၀၁၅ မတ်လ စတုတ္ထ ပတ်တွင် လှေ(၃)စီးဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ပင်လယ်ပြင်မှ စတင်ထွက်ခွာ
1:45 AM ပြည်တွင်းသတင်း, အားကစား, ဆောင်းပါး No comments
မိဘတွေရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကြောင့် လူသားအရုပ်မလေး ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့ ရုရှားသူ Angelica Kenova
1:28 AM အထွေထွေ No comments
ခါးကသေးသေး၊ အရုပ်မမျက်နှာလေးနဲ့ မိန်းမပျိုလေးဟာ အားလုံးရဲ့အမြင်မှာတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ဒီလို အရုပ်မလေးတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေအောင် သူမ ဘယ်လောက်ကြိုးစားထားရတယ်ဆိုတာတော့ သိချင်မှ သိကြမှာပါ။ ခုလို ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားရအောင် အစားလျှော့ရတာမျိုး၊ လေ့ကျင့်ခန်းကို မနားမနေ လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတဲ့အချက်က မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်သမီးလေးကို အရုပ်မလေးလို ဖြစ်အောင် စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။အသက် ၂၆နှစ်အရွယ် ရုရှားသူလေး Angelica Kenova ဟာ ခုဆိုရင် လူသားအရုပ်မလေးဆိုပြီး လူသိများကြသလို သူ့ကိုအားပေးကြတဲ့ follower တွေလည်း တော်တော်များများရှိနေပါပြီ။ သူမ ကလေးဘ၀ကတည်းက သူမရဲ့ မိဘတွေဟာ အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်၊ ဒါဟာ ခုလို လူသားအရုပ်မလေး ဖြစ်အောင် သူမကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တာလို့ Daily Mail မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
11:59 PM ပြည်တွင်းသတင်း, အင်တာဗျူး, အနုပညာ No comments
စာရေးဆရာမ၊ ကဗျာဆရာမ ရွှေရေးထင်ထင်နဲ့ ဧရာဝတီတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ အင်တာဗျူးကဏ္ဍကို ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ မြန်မာပိုင်းဝက်ဆိုဒ် မှာရော ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာပါ မနေ့က စတင်လိုက်ချိန်ကစလိုထူးခြားတာတခုကို တွေ့လာရပါတယ်။
အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ကဗျာဆရာမ၊စာရေးဆရာမ ရွှေရေးထင်ထင်ကို ဧရာဝတီက သတင်းထောက် ယုမွန်ကျော်က သူ့ရဲ့ ကဗျာတွေ စာပေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစုံစိစိမေးမြန်းထားတာတွေ၊ သူ့ ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့ရဲ့ lifestyle နဲ့ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းထားတာတွေ သူ ဘယ်လိုစာပေမျိုးကို နှစ်သက်လိုက်စားသလဲ စသဖြင့် မေးခွန်းပေါင်း တော်တော်များများကို အစုံအလင်မေးမြန်ထားပေမယ့် အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေထဲကမှ တခုတည်းတော့ မေးခွန်းကို focus လုပ်လို့ ဖေ့ဘုတ်သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင် status တွေမှာ တော်တော်များများ တင်ထားကြတာကို မနေ့ကရော ဒီကနေ့ရောမှာ ထူးထူးခြားခြား တွေ့လိုက်ရတာပါပဲ။
အိုဘားမားသမီးကို ကင်ညာကရှေ့နေတစ်ဦးက ကျွဲနွားများဖြင့် တင်တောင်းမည်
11:19 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ကင်ညာက ရှေ့နေတစ်ဦးက အသက် ၁၆ နှစ်ရှိ အိုဘားမား၏ သမီး မာလီယာနှင့် လက်ဆက်ပေါင်းဖက်ရန်အတွက် အိုဘားမားထံ နွားအကောင်ရေ ၅၀ နှင့် အခြား တိရစ္ဆာန်ဖြင့် အိုဘားမားထံ တင်တောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြသည်။
"ကျွန်တော် သူ့ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာပါ” ဟု သည်နိုင်ရိုဘီ သတင်းစာနှင့် အင်တာဗျူးတွင် ကီပရိုနိုက ဖြေကြားခဲံသည်။
ထိုအချိန်က သမ္မတ အိုဘားမားက ပထမဆုံးရာထူး တာဝန်ထမ်းနေချိန်ဖြစ်ပြီး မာလီယာမှာ ယင်းအချိန်တွင် အသက် ၁၀ နှစ်သမီးသာ ရှိသေးသည်။
11:12 PM ဆောင်းပါး No comments
နှစ်။ ဒေါ်စုရဲ့ ထက်အောက်ဝဲယာဆက်ဆံမှုအခြေအနေ။
ယူကရိန်းနှင့် နယူးဇီလန်ပွဲများတွင် မြန်မာအသင်း အမှတ်ရနိုင်ကြောင်း နည်းပြချုပ် ပြောကြား
9:40 PM ပြည်တွင်းသတင်း, အားကစား No comments
မြန်မာအသင်းသည် မကြာမီ ကျင်းပတော့မည့် ယူ ၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် အုပ်စုကျွတ်ရေး ကြိုးစားနေသည်နှင့်အညီ ယူကရိန်း၊ နယူးဇီလန်တို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည့်ပွဲများမှ အမှတ်ရအောင် ယူနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း နည်းပြချုပ်ဂတ်စ်ဇီက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ ၂၀၀ ကျော်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ အတည်ပြု
9:36 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
မြန်မာအစိုးရက ကယ်တင်ထားသည့် ဘင်္ဂါလီ ၂၀၀ ကျော်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည်ဟု စစ်တွေမြို့အခြေစိုက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှ ကောင်စစ်ဝန်က အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ရခိုင်ပြည်နယ် ဦးစီးမှူး ဦးခင်စိုးက ပြောကြားသည်။
တစ်ကိုယ်တော်အခွေအတွက် သီချင်းတွေ အပ်နေတဲ့ နန်းသူဇာ
9:33 PM ပြည်တွင်းသတင်း, အနုပညာ No comments
မော်ဒယ်နှင့် အဆိုတော် နန်းသူဇာက တစ်ကိုယ်တော်တေး စီးရီးကို ယခုနှစ်အတွင်း အမြန် ဆုံးထွက်ရှိနိုင်ရန် စီစဉ်နေပြီး ပါဝင်မည့် သီချင်းများအားလုံးကို တေးရေးများထံ အပ်ထားပြီးဖြစ် ကြောင်း နန်းသူဇာက ပြောကြား သည်။
ဘာကာတြိဂံတိုက်စစ်ကို လူကပ်ကစား၍ မရကြောင်း ဂျူဗီနောက်ခံလူ ချီလီယယ်နီ ပြော
9:32 PM နိုင်ငံတကာသတင်း, အားကစား No comments
ရောမ - လာမည့်ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွင် ဘာစီလိုနာနှင့်တွေ့ရမည့် ဂျုဗင်တပ်မှ နောက်ခံလူ ချီလီယယ်နီက မက်ဆီ၊ နေမာ၊ ဆွာရက်ဇ်တိုက်စစ်အတွဲသည် လူကပ်ကစား၍ မရသော တိုက်စစ်မှူးများဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြော ကြားလိုက်သည်။
ဘင်္ဂါလီ လှေစီးဒုက္ခသည်များအရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှုတ်ဆိတ်မနေရန် ဒလိုင်းလားမား တိုက်တွန်း
9:26 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် စကားပြောကြားနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်-ဓာတ်ပုံ−ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ)
ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးနိုင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ပိုမိုအားစိုက်ဆောင်ရွက်သင့် ကြောင်း တိဗက်သာသနာပိုင် ဘုန်းတော် ကြီး ဒလိုင်းလားမားက တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုက်သည်။
လွှတ်တော်မီဒီယာခန်း ပိတ်မှုကို ဝေဖန်၍ ဦးလှဆွေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ခေါ်ယူသတိပေး
9:25 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မီဒီယာများ သတင်းယူရန် သတ်မှတ်ထားသော အခန်းကိုပိတ်၍ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို ရိုက်ကူး၍မရသော နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ခဲ့သော အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ဦးနန္ဒကျော်စွာက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကာ သတိပေးခဲ့ကြောင်း ဦးလှဆွေက ပြောကြားသည်။
3:05 AM အင်တာဗျူး, အနုပညာ No comments
စာရေးဆရာမ ရွှေရေးထင်ထင် (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
အခု ရက်ပိုင်းအတွင်း Facebook ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ စာရေးဆရာမ ရွှေရေးထင်ထင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ ထင်မြင်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုကို ရေးသားပြီး Share ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ စာပေရေးသားတဲ့ စာရေးဆရာမ ရွှေရေးထင်ထင် ဆိုတာထက် သူ့ရဲ့ မော်ဒယ်ပို့စ် ဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ဝင်စားတာက ပိုတယ် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ရွှေရေးထင်ထင် ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားလာကြတဲ့ အွန်လိုင်းပရိသတ်တွေ များပြား လာတာကြောင့် ရွှေရေးထင်ထင်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ ဘယ်လိုစာပေတွေ ရေးသားတာလဲ၊ ဘာကြောင့် သူ့ရဲ့ စာပေထက် လူကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စား လာကြတာလဲ ဆိုတာကို သိရှိစေဖို့ ဖော်ပြပေးချင်တာကြောင့် စာရေးဆရာမ ရွှေရေးထင်ထင်ကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ယုမွန်ကျော်က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
1:05 AM ကျန်းမာရေး No comments
ဒါ့ကြောင့်လဲ ဆရာဝန်အများစုက မိခင်တွေကို ကလေးမွေးပြီး ၆ ပတ်အထိ ဘာမှမလုပ်သေးလဲ နားနားနေနေ နေထိုင်ဖို့ အကြံပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၆ ပတ် (နာရီပေါင်း ၁,၀၀၈ နာရီ) ဆိုတာ အင်မတန်ရှည်ကြာတဲ့ ကာလဆိုပေမယ့် သားအိမ်လမ်းကြောင်းက အရင်လို ပြန်ဖြစ်ဖို့ အလုပ်လုပ်နေရချိန်ပါ။
PNA တပ်ဖွဲ့ဝင်က ရွာသူရွာသားများကို သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်ရာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံး
တောင်ကြီးမြို့နယ် ကွန်လုံကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနားကျေးရွာတွင် မေလ ၂၅ ရက် ည ၇ နာရီခွဲက ပအိုဝ်းအမျိုးသားတပ်မတော် (PNA) မှ ဒုတိယဗိုလ်အဆင့် ရှိသူက ကျေးရွာသူရွာသားများကို သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်ရာမှ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
သင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်၊ မဖြစ် ဒီအချက်လေးတွေက ပြောပြနိုင်
10:50 PM အထွေထွေ No comments
စိတ်ဖိစီးတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာပါ။ သိပ်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အလုပ်ကြောင့် စိတ်ဖိစီးတာ၊ မိသားစုကိစ္စကြောင့် စိတ်ဖိစီးတာ၊ အချစ်ရေးကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းနေရတာမျိုးတွေဟာ လူတိုင်းနီးပါး တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး ခံစားနေရတာမျိုးဆိုတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီး ခံစားတတ်လွန်းရင်၊ စိတ်ဖိစီးတတ်လွန်းနေတဲ့ အခါမှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဖိစီးနေမှန်း မသိရင်တောင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ တစ်ချို့သောအရာတွေကြောင့် သင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သိသွားစေပါတယ်။ ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေက သင်စိတ်ဖိစီးနေတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးနိုင်ပါသလဲ။
“၀”တပ်ဖွဲ့တွင် ကလေးစစ်သားများရှိ နေကြောင်း ၀န်ခံ
၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA)တွင် ကလေးစစ်သားများ ရှိနေကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ကလေးစစ်သားအရေးကို ရေရှည်နည်းလမ်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းသွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း UWSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်မြင့်က The Messenger Media သို့ပြောသည်။ ကလေးစစ်သားအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (Unicef) နှင့်လည်း UWSA ဌာနချုပ်ရှိရာ ပန်ဆန်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သေးကြောင်း UWSA ထံမှ သိရသည်။
Unicef က ပန်ဆန်းဒေသက တပ်ဖွဲ့ကိုလာ လေ့လာတယ်။ ကလေးစစ်သားကိစ္စက ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ (၁၈) နှစ်မပြည့်တဲ့ ကလေးစစ်သားတွေရှိ နေတယ်။ “၀” တပ်ဖွဲ့ထဲက ကလေးစစ်သားတွေကို ထုတ်ပယ်ဖို့ကိစ္စက တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီးပွားရေး မိသားစုတွေနေထိုင်တဲ့ ဘ၀တွေရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စကို လွယ်လွယ်နဲ့ တစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြောပြီး ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟု UWSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်မြင့်က The Messenger Media သို့ ပြောသည်။
8:25 PM အနုပညာ 1 comment
NLD နှင့်အပြိုင် ပါတီထောင်၍ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည်မဟုတ်ဟု ၈၈ ပြော
8:13 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ယနေ့ NLD နှင့် ၈၈ ၏ ပူးတွဲ နိုင်ငံရေး ကြေညာစာတမ်း (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) နှင့်အပြိုင် စင်ပြိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတခုထူထောင်၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်မဟုတ်ဘဲ NLD နှင့်ညှိနှိုင်း၍ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောသည်။
7:52 PM ကျန်းမာရေး No comments
လှေစီးဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ...
လူရော စိတ်ရော ပင်ပန်းလွန်းတဲ့အခါ အပန်းဖြေခရီးထွက်သ...
၂၀၁၅ ထဲမှာ ကားကြီး ၆ ကားလောက် ရိုက်က်ဖို့ရှိတယ်လို...
အသက်ကြီးသွားပေမယ့် ဆယ်တန်းအရမ်းအောင်ချင်တယ် ဆိုတဲ့...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး သူရဦ...
သူနဲ့ ကိုယ် မြဲမမြဲဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေက ပြောပြပေးန...
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံ၏ လေးဘန်းဇ်ရောင်းသီအိုရီ(Leben...
ဖျော်ဖြေပွဲကို ဒုတိယအကြိမ် ဖျက်သိမ်းလိုက်လို့ ပရိသ...
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် လှေစီးဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီ(၇၀၀)ကျေ...
မိဘတွေရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကြောင့် လူသားအရုပ်မေ...
အိုဘားမားသမီးကို ကင်ညာကရှေ့နေတစ်ဦးက ကျွဲနွားမျာြး...
ဘာကာတြိဂံတိုက်စစ်ကို လူကပ်ကစား၍ မရကြောင်း ဂျူဗီနော...
PNA တပ်ဖွဲ့ဝင်က ရွာသူရွာသားများကို သေနတ်ဖြင့် ခြိမ...
ချစ်တင်းနှောချိန်တိုင်း ချစ်သူနှစ်ဦး ပိုမိုပျော်ရ...
ဗီဒီယို အကြိုခံစားခြင်း - တိုရှည်
လော်ခီးလာမှာ သတင်းကောင်း ကြားရမလား ?
မိုင်ဂျာယန်က ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီ ဘယ်ကိုဦးတည်နေသလဲ ?
ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားမပါရင် ဘာမှမလုပ်တဲ့ “ ၀ ” ခေါင်...
သူရဦးရွှေမန်း၏ မိခင်နာရေး ဒီချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလ...
အွန်လိုင်းမှာရောင်းချမယ့် ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ ဘာသာ...
Sexy မှ Sexy ပဲလို့ဆိုလာတဲ့ မော်ဒယ်လ် နန်းမြင့်မိုရ်
တပ်မတော်ကို ထောက်ခံရန် ဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်း
" မောင်ဖိုးချိုနှင့် သူ၏ကိုယ်စောင့်နတ် "
2015 Asian Festival of Speed (Models)
ဘတ်စကက်ဘော မန်နေဂျာ ဖြစ်လာတဲ့ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာ...
လှေစီးဒုက္ခသည်အများစုသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ တရားမဝင်လုပ...
ဘင်္ဂါလီ ငါးဦးကို တရားမ၀င်ခေါ်ဆောင်လာသူများ ဖမ်းမိ
ပြည်သူလူထုနှင့် နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေ...
နေ့လည်တရေးတမော အိပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
ကိုယ့်သားသမီးတွေကို စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့သူတွေ မဖြစ်...
မော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ တောင်ကိုရီးယားကို ထွက်ခွာသ...
အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့အခါ ဒီလို ကျန်းမာရေးကောင်းကျို...
မြေသိမ်းခံ တောင်သူတစ်ဦး မိမိကိုယ်ကိုယ် ဓာတ်ဆီလောင...
မိန်းမလျာဇာတ်ရုပ်နဲ့ အကယ်ဒမီရမယ်ဆိုရင် လိုချင်ပါတယ...
”Boat People ပြဿနာနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်”
”Boat People ပြဿနာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ”
ဒုတိယမြောက်သားငယ်ကို ဇွန်လကုန်မှာ မွေးဖွားမယ့် အြိ...
ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များကို မြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံရေးအတွက် ...
ရွှေတိဂုံ အနာဂတ် စိုးရိမ်ကြသူများ
Boat People ပြဿနာတွေရဲ့ “အဖြေ” က ဘာလဲ (မှူးဇော်)
ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီက အကြံအဥာဏ်ဟ...
“၀“ မူးယစ်ရာဇာ အိုက်ပန်းကို ဖမ်းဆီးခဲ့စဉ်က (ကိုယ်ေ...
တောင်ကြီးတွင် တရားရုံးဒဏ်ငွေကို မလေးစားသော ဆိုင်ကယ...
မန္တလေးမြို့ပေါ်တွင် သုံးရက်အတွင်း လူလေးဦး ဓာတ်လိုက...
အချစ်ရေးက အရမ်းစိတ်ညစ်ခဲ့ရလို့ သူချစ်ကိုပဲ ရှာတော့...
Boat People ပြဿနာ နှင့် မြန်မာ မီဒီယာများရဲ့ ၀ံသာန...
ကောသလမင်းကြီး အိမ်မက် ၁၆ ချက်
ရုပ်ရှင် အကြိုခံစားခြင်း - ကျွန်မက နှင်းဆီပါမောင်
မင်းပြား၌ ဖမ်းဆီးရမိသည့် ရွှေရောင်ဆာဖာငါးအား စီးပွာ...
လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေ လူ့အခွင့် အရေး ခံစားထိုက်ကြောင်း...